Momba anay-FIREWORKS CHILI
FOANA NY MPIARAKA TSARA ANAO!
CHILI FIREWORKS dia fananan'ny fianakaviana ary iray amin'ireo mpanamboatra afomanga lehibe indrindra ao Shina, natsangan'i Atoa Li Bingnan tamin'ny 1997, izay navitrika tamin'ity orinasa ity nandritra ny 50 taona mahery, ny finoana matanjaka dia natsangana voalohany hatramin'ny andro nisian'ny CHILI nanorina. Nandefa ny orinasanay manokana izahay, nanangana ivon-toerana fizarana sy trano fitahirizan-tenanay manokana hanatanterahana ny fangatahana fitahirizana mitombo. Ary mampihatra ny rafitra fitantanana kalitao izahay eo ambanin'ny ISO 9001: 2015, BAM (Alemana), KONSTRUKTA (Slowakia), CerTrust (Hongria), fanamarinana AW (Espana), manampy amin'ny fiantohana ny kalitaon'ny vokatray izy ireo, izy ireo no vavolom-belona momba ny rafitra fiantohana kalitao. fananganana hatramin'ny andro nahatsapantsika fa rafitra QA sy QC feno sy mahomby no ilaina.
Ny tanjaky ny orinasa iray dia miankina indrindra amin'ny fanavaozana amin'ny lafiny rehetra mandritra ny asa aman-draharaha, ny ekipanay dia manohy mamorona entana vaovao isaky ny vanim-potoana ary mitondra hevi-baovao ho tena izy. Ny fifandraisana sy ny fifampiraharahana dia heverina ho zava-dehibe indrindra alohan'ny handaminana ny zavatra rehetra, ny ekipa dia mirona hiara-hianatra foana, handalina ary hiady hevitra mba hitazomana ny hafainganana sy hijanonana ho vaovao.
Tao anatin'ny 20 taona lasa, ny ekipa mpitantana, ny fampiroboroboana ny vokatra, ny rafitra ERP ary ny fitantanana ny toerana dia nohavaozina ary nohatsaraina imbetsaka mba hifanaraka amin'ireo fiovana sy ambaratonga fitakiana isan-karazany avy amin'ny tsena. NY FIANGONANA CHILI dia mivoatra hatrany ary tsy manova velively ny fikasana tany am-boalohany. Manolotra karazan-vokatra pyrotechnic feno ho an'ny fahitan'ny mpanjifa izahay, amin'ny tanjon'ny famokarana vokatra lafo vidy sy kalitao tsara indrindra, ny ekipan'ny R&D sy ireo ozinina tsy mijanona amin'ny fanarahana pyrotechnics avo lenta sy ireo akora ambony.
Ny marika BLACK SCORPION dia voasoratra anarana ho marika famantarana ary nanomboka ny marika sy ny marketing tamin'ny taona CHILI FIREWORKS dia natsangana. Izy io dia mandrakotra ny vokatra feno pyrotechnic eny an-tsena na ho an'ny mpanjifa na ho an'ny matihanina (1.4G, 1.3G), BLACK SCPORPION dia manana mpanjifa mpanohana be dia be any amin'ny firenena maro ankehitriny. Ny traikefa manan-karena dia mahatonga antsika ho iray amin'ireo mpanamboatra sy mpanondrana afomanga lehibe indrindra amin'ity indostria ity, ny BLACK SCORPION dia maneho ny vokatra avo lenta sy ny vidiny mifaninana am-boalohany ary mitondra ny hoavintsika maharitra.